Olee otú Wepụ Audio si MP4 na Windows na Mac
Olee otú Wepụ Audio si MP4 na Windows na Mac?
MP4 video format-aghọ esiwanye ewu ruru ya ndakọrịta na ọtụtụ mobile ngwaọrụ. Mgbe MP4 format bụ maka video faịlụ, e nwere ike inwe mgbe nnọọ na ị chọrọ ịnụ ọdịyo. Dị otú ahụ a dịruru ná njọ, i kwesịrị audio Adịrị software na ga-wepụ ọdịyo si chọrọ MP4. E nwere otu n'usoro nke software nchịkọta dị na ahịa na-ekwu na wepụ audio si MP4 video faịlụ, nanị ole na ole n'ime ha nwere ike inye ndị chọrọ n'ihi na mma.
Download Videos si 1000+ video nkekọrịta weebụsaịtị, dị ka Vimeo, Dailymotion, wdg
Nkwado nbudata ọdịyo faịlụ na na Firefox, Chrome na ntụgharị
Ebuli videos maka: iMovie, iTunes, iPhone, Apple TV na ndị ọzọ
A wuru na-Player enye gị ohere enwe FLV, MP4, WebM videos cozily
Part 1: Olee otú Wepụ Audio si MP4 site Iji Wondershare Video Converter Ultimate?
Part 2: Olee otú Wepụ MP3 si MP4 site Iji iTunes11?
Nkebi nke 3: Olee otú iji Wepụ Audio si MP4 site Iji VLC?
Wondershare Video Converter Ultimate Maka Windows na "Wondershare Video Converter Ultimate for Mac" n'ihi na Mac sistemụ bụ otu nke kasị mma software dị na ahịa na ike wepụ audio si gị MP4 video faịlụ. The software na-enye a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ atụmatụ dị ka ọkụ gị video faịlụ ka DVD, converting ndị ọzọ formats dị ka mpg wdg I nwekwara ike dezie gị vidiyo site na iji Wondershare Video Converter Ultimate.
Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ audio si gị MP4 video faịlụ, mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1 Launch software na-emeghe gị MP4 faịlụ
Nzọụkwụ mbụ bụ ẹkedori Wondershare Video Converter Ultimate software na mgbe ahụ na-agagharị na faịlụ na ị chọrọ wepụ audio si. Ị nwere ike imeghe gị MP4 faịlụ site ma-adọkpụpụta ya n'ime software interface ma ọ bụ nanị na-eji "tinye faịlụ" nhọrọ na-agagharị na gị zọpụta MP4 faịlụ.
Nzọụkwụ 2 Họrọ mmepụta format dị ka MP3
Nzọụkwụ ọzọ bụ ezipụta na mmepụta format na ị na-achọ. N'ihi na ị na-ahọrọ na mmepụta format, họrọ "format" akara na mgbe ahụ họrọ format n'okpuru "audio" ngalaba. Wondershare Video Converter Ultimate Akwado a ọnụ ọgụgụ nke ọdịyo formats dị ka MP3.
Nzọụkwụ 3 tọghata gị faịlụ
Ozugbo i kpọmkwem mmepụta format, pịa na "tọghata" button ka software ka akakabarede maka gị. Ị nwere ike imeghe faịlụ mgbe akakabarede ịhụ nke pụrụ ịkpata.
Ọ bụrụ na ị na-eji iTunes11, mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru wepụ MP3 si gị MP4 video faịlụ:
Nzọụkwụ 1 Launch iTunes na-agagharị gị MP4 video faịlụ
The nnọọ Nzọụkwụ mbụ bụ ẹkedori iTunes software na-ahọrọ MP4 video faịlụ na ị chọrọ iji tọghata.
Nzọụkwụ 2 Mee mmasị gị
Nzọụkwụ ọzọ bụ ka ndị mmasị maka MP3 ngbanwe. N'ihi na mwube nke mmasị, ị nwere ike ma, ị nwere ike ịhọrọ "mmasị" nhọrọ si menu mmanya ma ọ bụ pịa "iwu + rikoma" igodo na gị Mac.
Mgbe na-ahọpụta mmasị nhọrọ, mmasị window ga-emeghe site na nke ị ga-ahọrọ elu nhọrọ.
Ahọrọ "Importing" button n'okpuru elu ngalaba. Site importing ngalaba ahọrọ "MP3 encoder" si otú ikwu mwube gị.
I nwekwara ike dee omenala ntọala maka sample ọnụego na bit ọnụego site n'ịhọrọ "Custom" n'okpuru ibubata iji ngalaba.
Nzọụkwụ 3 Wepụ gị audio
Ozugbo i kere ihe nile mgbanwe ndị na-mmasị nhọrọ, ugbu a unu bụ njikere wepụ ọdịyo si gị MP4 video faịlụ. Jide n'aka na ị họọrọ nri ụda track wee họrọ "elu" menu. Họrọ "tọghata nhọrọ ka MP3" site na nke a menu.
Ozugbo akakabarede bụ zuru ezu, ị ga-achọpụta na e nwere n'ezie abụọ faịlụ na otu aha. Usoro nke ma ndị a faịlụ ga-adị iche na ibe. Iji gosi na nke pụrụ ịkpata faịlụ a bụ na MP3 format, ị nwere ike pịa "Wụk + m" ịhụ ihe ọmụma zuru ezu.
N'agbanyeghị ma na ị na-arụ ọrụ na Windows arụ ọrụ ma ọ bụ usoro Mac sistemụ, VLC nwere ike mgbe niile-enyere gị aka adịrị audio si MP4.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows Sistem, mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru wepụ audio si gị MP4 video faịlụ:
Nzọụkwụ 1 Launch VLC
The nnọọ Nzọụkwụ mbụ bụ ẹkedori VLC ọkpụkpọ na-ahọrọ "tọghata / Save" nhọrọ si "Media" menu nhọrọ.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị faịlụ
Nzọụkwụ ọzọ bụ ka ịgbakwunye chọrọ faịlụ. Ị nwere ike pịa na "tinye faịlụ" nhọrọ na-agagharị na gị MP4 video faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Ezipụta aha na ụzọ mmepụta
Ị nwere ike ma na-azọpụta gị nke pụrụ ịkpata faịlụ na ndabara ebe ma ọ bụ ezipụta ya na gị onwe gị. I nwekwara ike dee faịlụ gị aha nke pụrụ ịkpata faịlụ.
Nzọụkwụ 4 Dezie profaịlụ ka MP3
Mgbe ị na-converting gị MP4 video faịlụ n'ime ihe ọdịyo faịlụ site VLC, jide n'aka na i nwere MP3 profaịlụ dị ka mma. Ị nwere ike idezi profaịlụ n'okpuru ntọala nhọrọ. A ọhụrụ profaịlụ window ga-apụta, na nke ị nwere ike ezipụta ọhụrụ faịlụ aha na-agbanwe mmepụta usoro. Họrọ "WAV" n'okpuru "Encapsulation" taabụ na "MP3" n'okpuru "audio codec" taabụ. Pịa na "ịzọpụta" button ịzọpụta ọhụrụ a profaịlụ.
Nzọụkwụ 5 Malite akakabarede
Ozugbo i kere ihe nile mgbanwe ndị na-profaịlụ, mechie profaịlụ window na pịa "amalite" button na-amalite akakabarede.
VLC ga ugbu a na-amalite adịrị usoro na oge nke mmịpụta na-emekarị na-adabere faịlụ size.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac Sistem, ị ga-eso obere dị iche iche usoro maka adịrị MP3 si MP4 media faịlụ site VLC. Lee ndị nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1 Họrọ faịlụ na ẹkedori VLC
Họrọ faịlụ site na nke ị chọrọ wepụ ọdịyo na mgbe ahụ nri pịa ya na-emeghe a onodu menu. Site na onodu menu meghere, họrọ "Open na VLC". Ozugbo faịlụ a meghere ke VLC, họrọ "tọghata / Stream" nhọrọ si "faịlụ" menu.
Nzọụkwụ 2 Ezipụta aha na ebe
Mgbe ị na-ahọrọ tọghata / iyi nhọrọ, a ọhụrụ window ga-egosi ebe i nwere ike ezipụta na ọnọdụ na aha gị nke pụrụ ịkpata faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Dezie profaịlụ
N'ihi na akakabarede usoro, i kwesịrị dezie profaịlụ na ịtọ encapsulation dị ka WAV na codec dị ka MP3.
Nzọụkwụ 4 Mee ntọala na na tọghata
Ozugbo i zọpụta ntọala niile, i nwere ike na-amalite converting gị faịlụ. Ị nwere ike ma na-enuga faịlụ ngwa ngwa mgbe akakabarede ma ọ bụ chekwaa ya ka kpọmkwem nchekwa maka mgbe e mesịrị ikiri.
Olee otú Download Vimeo ka MP4 na elu àgwà?
> Resource> MP4> Olee wepụ Audio si MP4 na Windows na Mac